Izindaba - I-CONVISTA Ithuthukise i-Parallel Slide Gate Valve yezinhlelo zamapayipi zengcindezi ephezulu naphakathi kuka-600 kuya ku-1,000MW ophahlazekayo (i-ultra-supercritical) unit steam turbine
Ngo-Agasti ka-2018, i-CONVISTA yathuthukisa ngempumelelo ama-Value Slide Gate Valves amasistimu wepayipi lokucindezela okuphezulu naphakathi kuka-600 kuya ku-1,000MW ophahlazekayo (i-ultra-supercritical) unit steam turbine.
Isebenzisa ingcindezi yokuzivala, ngokuxhuma okushiselwe emaphethelweni womabili.
Isebenzisa i-valve yokuhamba kagesi ekungeneni nasekuphumeni kokulinganisa ingcindezi yokuhlukanisa ekungeneni nasekuphumeni.
3. Umshini wayo wokuvala usebenzisa isakhiwo esifana ne-flashboard. Ukufakwa uphawu kwe-Valve kusuka ekucindezelweni okuphakathi esikhundleni se-wedge mechanical force force ukuvimbela i-valve ekuhluphekeni okuyingozi ngesikhathi kuvulwa futhi kuvalwa.
4. Nge-cobalt-based rigid alloy build-up welding, ubuso bokufaka uphawu bufaka ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokuhuzuka, impilo yensizakalo ende nezinye izici.
5.Ngokwelashwa kwe-anti-corrosion kanye ne-nitrogenization, indawo ye-valve stem inezinto ezinhle zokumelana nokugqwala, ukumelana nomhuzuko kanye nokufakwa uphawu kwebhokisi lokufaka okuthembekile.
6. Ingahambisana namadivayisi kagesi ahlukahlukene asekhaya nawangenisiwe ukuhlangabezana nezidingo zokulawulwa kweDCS futhi uqaphele ukusebenza okukude nokwasendaweni.
7. Izovulwa ngokuphelele noma ivalwe ngesikhathi sokusebenza. Ngeke isetshenziswe njenge-valve elawulayo.